ကို ထောက်. နှင့် ထောက်. သောက် | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › ကို ထောက်. နှင့် ထောက်. သောက်
ကို ထောက်. နှင့် ထောက်. သောက်
ကြိုးအလိုငှာတစ်ဦးလူသိများတဲ့ဂျပန်သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအရက်နှင့်ရေ, ဆန်, Malt ဆန်နှင့်တဆေးကို အသုံးပြု. ပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သွန်းလောင်းရဲ့အရသာနှင့်အရက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကို ထောက်. ငွေရတတ်သောသူနှင့်ရှုပ်ထွေးသောမှအလင်းနှင့်မောထံမှအထိရသောအရသာ၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့စုဆောင်းခြင်းရှိနိုင်ပါသည်။
ကြိုးအလိုငှာအမှန်တကယ်ဂျပန်တွင် nihonshu သို့မဟုတ် seishu ဟုခေါ်သည်နှင့်တထောင်တစ်နှစ်ကျော်မျှတစ်အကြိုက်ဆုံးအဖျော်ယမကာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကိုပထမဦးဆုံး 689 အေဒီဂျပန်နေ့စွဲအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ, တစ်ဆန်သောက်၏မှတ်တမ်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ဟုယုံကြည်နေသည်နေစဉ်။ ဒါကြောင့်များစွာသောဘာသာရေးအခမ်းအနားများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်အဖြစ်ဒါဟာအမည်အား ” ဘုရားများ၏သောက် ” ပေးထားခဲ့သည်။ omiki ကိုခေါ်တစ်ခုမှာရိုးရာဓလေ့ထုံးစံဘာသာရေးသဟာယအဖြစ်ကို ထောက်. သောက်သုံးလူတွေပါဝငျသညျ။ ဒါဟာသင်သောက်တခါသငျသညျပိုမိုနီးကပ်စွာဘုရားဖြစ်လာကြပြီဟုယုံကြည်နေသည်။ ကို ထောက်. ထုတ်လုပ်မှုအစိုးရကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့် 10 ရာစုအတွက်ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့်ကွန်းပြင်ပအသုံးပြုရန် ထောက်. စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်စတင်ခဲ့သည်။ ဤအသောက်စျေးကြီးဖြစ်လာအဖြစ်ကတတ်နိုင်သူများများအတွက် status ကိုသင်္ကေတအတွက်ရလဒ်။ မည်သူမဆိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သတ်မှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းများနောက်တော်သို့လိုက်အဖြစ်ကို ထောက်. ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် 1868 အေဒီကနေနန်းစံအတွက်ဧကရာဇ်မေဂျီလက်အောက်တွင်ဥပဒေများကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ကြသည်။ နီးပါး 30000 ဘီယာတစ်ဦးတည်းတစ်နှစ်အတွက်အပင်ပေါက်သော်လည်း။ အမြိုးသမီးမြားကို ထောက်. အောင်အတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍ ယူ. မကြာမီအမည်ပြောင် ” အိမျကဘီယာအရက်ချက်သခင် ” တက်ခူး။ လူတို့သညျ 16 ရာစုကာလအတွင်းကျော် ယူ. ထောက်. ထုတ်လုပ်မှုနေဆဲအထီးကြီးစိုးစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကို ထောက်. မကြာမီယခုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်တွေ့ရှိဂျပန်ခရီးသွားများနှင့်ဘီယာနှင့်အတူထိခိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကို ထောက်. ဝေါဟာရ:
Oshaku ကို ထောက်.မျှဝေတဲ့အခါမှာအသုံးပြုခဲ့မူအကျင့်:
သောက် ထောက်. ကွန်တိန်နာ:
ယဉ်ကျေးရှိပါတယ် ထောက်. မသောက်ရသောအခါစဉ်းစားရန် Courtesy ။ တဦးတည်းကို ထောက်. အစားအသောက်နှင့်အတူသောက်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီအစဉ်အလာသောက်တန်ဖိုးထားကူညီရန်အချို့ထောက်ပြကြသည်။
သငျသညျကို ထောက်. အမိန့်လိုက်တဲ့အခါ 1. က tokkuri လို့ခေါ်တဲ့ဘူး shaped ကွန်တိန်နာအတွင်းရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာပူသို့မဟုတ်အအေးအရက်မူးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူအများစုသူတို့က၎င်း၏အရသာအပေါငျးတို့သကိုမြည်းစမ်းနိုင်အောင်ချမ်းအေးကသောက်သုံးစဉ်းစားပါ။
2. သင်ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူလျှင်, သင်အမြဲထိုသူတို့အဘို့သွန်းလောင်းလောင်းသင့်ပါတယ်။ သူတို့ဟာထို့နောက် tokkuri ဘူးကောက်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အလို့ငှါသွန်းလောင်းမည်။ ဒါကထုံးစံ oshaku ခေါ်သင်တို့ကိုလည်း၎င်းတို့၏ခွက်ကိုအပြည့်အဝဆက်လက်တည်ရှိသင့်ကြောင်းစစ်ဆေးလိုအပ်သည်ဖြစ်ပါတယ် – ကဗလာမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်။
3. အရက်သောက်ဘို့အလိုငှါခွက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ဦး sakazuki ငယ်လေးတစ်ပန်းကန်နေစဉ် Choko နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းအဘို့အသေးငယ်တဲ့ခွက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များနဲ့ကြီးမားတဲ့ပွဲအပါအဝင်တရားဝင်အခါသမယများအတွက်အသုံးပြုသည်။
4. သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ခွက်ကိုသို့မဟုတ်ပန်းကန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ဆိုသညျကား, “Kanpai!” အခုဆိုရင်သေးငယ်တဲ့ sips နှင့်သင်၏မျက်နှာကို ထောက်.
1. အောက်တိုဘာလ 1 အဖြစ်လူသိများသည် အရာရှိတဦးကဂျပန်အတွက်ကြိုးအလိုငှာနေ့။ ဂျပန်မှာတော့ဒီ hi အဘယ်သူမျှမ nihonshu အသံထွက်နေသည်။
2. ကြိုးအလိုငှာသည်အခြားအရက်အချိုရည်ထက်ပိုမို ” ဖော်ရွေအစားအစာ ” စဉ်းစားသည်။ အခြားသူတွေမတူဘဲ, ဆိုးရွားစွာကိုသင်၏အစာ၏အရသာကိုထိခိုက်စေရန်မဆိုးဆေးသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအချဉ်ဓာတ်လည်းရှိပါသေးတယ်။ ဒါဟာအစ gluten နှင့်ကြာရှည်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့3ထောက်. သောက်သုံးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ဖို့အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဤကင်ဆာအန္တရာယ်များကိုလျှော့ချအရိုးပွရောဂါကိုကာကွယ်, သွေးတိုးလျှော့ချခြင်းနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ကျစေပါတယ်ပါဝင်သည်။ ဂျပန်တွင်ပြည်သူ့လည်းယုံကြည် ပူဆာကေးဗတ်သင့်ရဲ့အသားအရေ moisturise မှအကျိုးရှိသောဖြစ်ကြ၏။
အချို့ကပထမဦးဆုံး 4800 ဘီစီကတရုတ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်ယုံကြည်အဖြစ် 4. ကြိုးအလိုငှာ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်အကြီးဆုံးလူသိများအရက်အဖျော်ယမကာဖြစ်ပါတယ်။
5. ရှေးဂျပန်ဘီယာကုမ္ပဏီကြီးကို ထောက်. အတွက်အရေးပါတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်တံတွေးထွေးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမှို ကို ထောက်. ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်စဉ်အတွင်းဆန်ချဉ်ပေါက်ဖို့ဒီရက်ကိုသုံးပေမယ့်တစ်ချိန်ကအချိန်အပျေါမှာတံတွေးကနေအင်ဇိုင်းတွေအတွက်ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကူညီခဲ့သည်။ ရွာသူရွာသားကလုပ်အတူစုဝေးမယ်လို့ကြောင့် ထောက်. တက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးပွတ် ထောက်. ဆန်အပေါ်ဝါးပြီးနောက်လူမျိုးရေးအိုးသို့င်း၏ရုပ်ကြွင်းတံတွေးထွေးလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအကြွင်းအကျန်ထို့နောက်သောက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဆန် 6. နှစ်ဦးအမျိုးအစားများကို ထောက်. တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကား kouji mai နှင့် kake mai ဟုခေါ်ကြသည်။ ဆန်ဤအမျိုးမျိုး၏ပမာဏနှင့်အရောအနှောကိုဖန်ဆင်းကြောင်း ထောက်. အမျိုးအစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ Kouji mai ဆန်အထူး ထောက်. ချမှတ်ခြင်းများအတွက်အင်ဂျင်နီယာနှင့် kake mai တစ်ဦးထက်ပိုသောဘုံဆန်အဖြစ်ရှုမြင်နေစဉ် ပို. စျေးကြီးသည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
7. ထောက်. ၏စျေးအကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ် Wataribune အားဖြင့်အဘယ်သူမျှမဏကို ထောက်. kame ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 720ml ပုလင်းများအတွက် $ 500 ကိုအမေရိကန်မှာ resales ။ အဆိုပါဘရူချတဝက်က၎င်း၏ကနဦးအရွယ်အစားဆန်အသီးအသီးတို့သည်စပါးကို polishes အဖြစ်က Dai ginjo သို့မဟုတ်ပရီမီယံကို ထောက်. အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအကို ထောက်. Cross-ရပ်ကြီးခဲ့ဆန်ကိုသုံးပြီးထားကြပါတယ်သော်လည်းဒါဟာအစ, ဆန်တစ် ” စင်ကြယ်သော ” ဖောက်နှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့အချည်းနှီးသာအလှဆင်ဘို့ဖြစ်ကြပေမယ့် 8. ကြိုးအလိုငှာစည်, ရှင်တိုကွန်းဆင်ယင်ခြယ်သဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစည်အလှဆင်စည်, ဆိုလိုတာက kazaridaru ဟုခေါ်ကြသည်။ ဤသည်ကို ထောက်. ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကွန်းနှင့်ဘုရားကျောင်းထုတ်လုပ်သောအခါမှဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးနတ်ကွန်းမှာအလှဆင်စည်နေရာမယ်ဆိုရင်ဒါဟာကောင်းသောကံစဉ်းစားသည်။
9. ကြိုးအလိုငှာသင်သောက်ရှိရာထိုသို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရာသီ မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျနွေဦးစဉ်အတွင်းတစ် Sakura သစ်ပင်အောက်ကိုသောက်တဲ့အခါမှာ Hanami ထောက်. ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များအတွင်း sakazuki ပြားချပ်ချပ်ပန်းကန်နှင့်အတူကို ထောက်. မသောက်နှင့်က toso ဟုခေါ်သည်။ ဆောင်းဦးစဉ်အတွင်းအပြည့်အဝလတွေရဲ့ရန်စဉ်သောက်သုံးခြင်းကြောင့် tsukimi ထောက်. ဟုခေါ်သည်။ မိုဃ်းပွင့်ကျဆုံးခြင်းကြည့်နေစဉ်သင်အိမ်တွင်းသောက်သည့်အခါနောက်ဆုံးတွင် yukimi ထောက်. ဖြစ်ပါတယ်။
စပျစ်ဥယျာဉ်သို့မဟုတ်ဘီယာဘီယာခရီးစဉ်ကဲ့သို့ပင် 10. သင်တစ်ဦးကို ထောက်. ဘီယာခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Sawai ဂျပန်အတွက် Ozawa ကြိုးအလိုငှာ Brewery အဖြစ်ခရီးသွားနေရာများ, အင်္ဂလိပ်အတွက်ခရီးစဉ်ရှိသည်။ ကတောင်ပေါ်မှာ Mitake အနီးတွင်တည်ရှိသည်အဖြစ်အထူးသဖြင့်ဤသည်ဘီယာင်း၏လှပသောအမြင်များများအတွက်လူသိများသည်။
MaikoyaJapaneseTraditionizakayajapanesesakejaoaneseculturekanpaisakazukichokodrinkingcultureအိုဆာကာဂျပန်ထောက်.ဘီယာmaikoya အိုဆာကာစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်သောက်စရာအရက်သောက်ဆန်ဂျပန်သောက်စရာဂျပန်အစားအစာထောက်. ဘီယာ